भिडियो: गुल्मीमा यसरी बेहुलीलाई अंगालो मारेर नाचेपछि त सक्की गो नि….. – Gulmiews
भिडियो: गुल्मीमा यसरी बेहुलीलाई अंगालो मारेर नाचेपछि त सक्की गो नि…..
May 19, 2015 Sanju Kauchha
No comments	बिहेको दिन नयाँ बेहुलीलाई गम्लङ्ग अँगालो मारेर नयाँ जोडीको बडो रमाईलो नाच । गाउँठाउँको पञ्चे बजा । के बिधी रमाईलो हो यो । जन्त नगाको पनि १० बर्ष नै भएछ । भिडियो हेर्दा त यती रमाईलो छ, त्यहाँ झन कती रमाईलो भयो होला 😀
भिडियो: पौडेल डिजिटल
Related Posts	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापा...	October 21, 2016	चन्द्र भण्डारीले घरमा दसैं नमनाएर किन बोटेगाउँका माझिहरुसँग मनाए? भिडियो र...	October 13, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	यार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महत्व छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ)